ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်အားမည်သို့သင်ကြားရမည်နည်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကုသသူ Nuala Deering & Dr. June Clyne (2017) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn တွင်
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 17, 2017 ။ ဆောင်းပါး Link ကို
အသက် ၂၀ အရွယ်လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းသောအလွယ်တကူစွဲလမ်းနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်စိတ်မထိန်းနိုင်သည့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်ဟု Gwen Loughman ကပြောကြားသည်။
အင်တာနက်သည်မှောင်မိုက်ဘက်ညစ်ညမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "babyish အလွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပ်ရောဂါဖြစ်လာပြီ" Nuala မင်, ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအိုင်ယာလန်နှင့်အတူကြားဆက်ဆံရေးနှင့် psychosexual ကုထုံးကပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့သင့်အဖြစ် "ကျနော်တို့ကဖြေရှင်းကြသည်မဟုတ်။ ဒါဟာစည်းကမ်းတနှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်သူမဆိုအသက်အရွယ်အုပ်စုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်း၏ဒီရေရပ်တလို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပညာပေးနှင့်မိသားစုများမကြုံစဖူးအပြောင်းအလဲ၏လောကဓာတ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သူတို့သားသမီးများကို ပြင်ဆင်. ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ "
ဆိုက်ဘာ-လိင်စွဲစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လာမယ့်ဆူနာမီဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်နေပါတယ်။ ရှိလျှင်၎င်းတို့၏နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းယောက်ျား newsagents ၏ထိပ်စင်ပေါ်အပေါ်ပလပ်စတစ်ဖုံးလူကလေး mags ၏, ပမာဏမှာစာမျက်နှာရှိသည်။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပျောက်တဲ့ခလုတ်ကိုများ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူစက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ဤလုလင်တို့သည်တစ်ချိန်ကအဘိုးကြီးရဲ့ဆငျးရဲခွငျးဘာနှင့်အတူတင်ပြကြသည်။ ဤရွေ့ကားအဘယ်သူမျှမဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာလူပျိုတို့ဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ခုစွဲဖြစ်လာသည့်ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှု, သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦး debilitating အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဇွန်လ Clyne, psychosexual နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကုထုံး (www.sextherapyireland.com), ရသောအခါသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူရင်းနှီးသူမ၏အလေ့အကျင့်အစီရင်ခံအခက်အခဲများအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးပွားလာအရေအတွက်ရတဲ့နှင့်တစ်ခုစိုက်ထူစောင့်ရှောက်ခြင်းမြင်သည်။
1. လိင်နှင့်လိင်တစ်အချိန်ဆွေးနွေးချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပွင့်လင်းလျက်နေကြလော့တဦးတည်း session တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြာတွင်အသက်အရွယ်မှာ '' တစ်ဦးကိုမကြာခဏနည်းနည်းနှင့် '' အချိန်-frame ကိုထက်အချက်အလက်များ၏လွှမ်းမိုးနှင့်အတူအစောပိုင်းစကားပြောကိုစတင်ပါ။
2. ဒါဟာကန့်သတ်ရှိသည်ဖို့ပညာရှိဖြစ်၏။ သို့သော်အဓိကအာရုံစိုက်သင့်ကလေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်ဖြစ်သင့်, ဒါသူတို့အသက်ကြီးလာဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိင်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စိတျပိုငျးဆိုငျရာကြှမျးကငျြမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
3. သတိရပါကြောင်းသိချင်စိတ်ကျေနပ်အောင်မှဒုက္ခဆိုသော်ငြားလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်ပုံမှန်ကျန်းမာသည်နှင့်ညစ်ညမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်မကြာခဏသူတို့ဖြတ်ပြီးလာဘယ်သို့သောအားဖြင့်လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုသင်သူတို့သည်သင့်ထံသို့မလာနိုငျခံစားရချင်တယ်။
4. သင့်စကားဝိုင်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မရသင့်တယ် '' porn မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် '' ။ သင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးထင်နှင့် porn နှင့် ပတ်သက်. ခံစားရသောအရာကိုစူးစမ်းပါ။ သူတို့ကို non-စျကွောစီရငျလမ်းအတွက်အန္တရာယ်များသိပါစေ။
5. ဤအကိစ္စများအကြောင်းပြောနေတာသည့်အခါ, တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်, ကြားနေအသံဖြင့်သုံးပါ။ အဘယ်သူမျှမပို့ချချက်မျှအပြစ်တင်, မရှက်။ ပါဝါရုန်းကန်မှုများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမထားပါနဲ့။ ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုလေ့ကျင့်! သိသိသာသာတုန်လှုပ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ကလေးကိုသင်သည်စကားပြောဆက်လက်မညျဖွစျကွောငျးဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါလိမ့်မယ်။